जनप्रेमीमा वर्ल्डकप फिभर- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
जनप्रेमीमा वर्ल्डकप फिभर
काठमाडौँ — विश्वकप फुटबल उद्घाटनको दिन पारेर भक्तपुरको जनप्रेमी स्कुलले 'वर्ल्डकप फिभर' प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । बिहीबार दिउँसो स्कुलको प्रांगणमा विद्यार्थीलाई खेल भावना जगाउन र फुटबलको ज्ञान सिकाउने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो ।
६ देखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत छात्र तथा छात्राले उक्त प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए । ब्राजिल, जर्मनी, पोर्चुगल र अर्जेन्टिनाका समर्थक विद्यार्थीको समूह बनाएर खेल खेलाइएको थियो । १० समूहका विद्यार्थीले भाग लिएका उक्त प्रतियोगितामा ब्राजिलका समर्थक समूहले खेल जित्यो भने पोर्चुगलका समर्थक विद्यार्थीको समूह दोस्रो भयो ।
जम्मा ७/७ मिनेट खेलाइएको उक्त प्रतियोगितामा लिग, सेमिफाइनल र फाइनल खेलाइएको थियो । फाइनलपछि विजेता ब्राजिलका समर्थक समूहका कप्तान कक्षा १० मा अध्ययनरत राजीवजंग कार्कीले रमाइलो लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, 'हामी आफैंले विश्वकप खेले जस्तो लाग्यो । यस्ता खेलले विद्यार्थीलाई खेलमा झुकाव बढाउँछ । हामीलाई फुटबल खेल झन् लोकप्रिय लागेको छ ।'
७ जनाको समूह बनाइएको उक्त प्रतियोगितामा ५/५ जना विदर्यार्थीले मात्रै मैदानमा खेलेका थिए । प्रतियोगितामा विजेतालाई प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरुप वर्ल्डकपको प्रतिमूर्ति दिइएको थियो । ४/४ वर्षमा हुने विश्वकप फुटबलबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिन र फुटबल खेलप्रति विद्यालय तहदेखि नै लगाव बढोस भने प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको स्कुलका प्रिन्सिपल निलेश आचार्यले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ २१:४२
सत्तापक्षकै सांसद विरोधमा उत्रिएपछि बैठक सारियो
जेष्ठ ३१, २०७५ मकर श्रेष्ठ
सत्तापक्षकै सांसद मन्त्रीविरुद्ध उभिएपछि संसद् सचिवालयले शुक्रबारका लागि निर्धारित बैठक आइतबारलाई सारेको छ । शुक्रबार महिला बालबालिका, संघीय मामिला, सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलक्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले मन्त्रीको चर्को विरोध गरे । सांसदहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भन्दा पनि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारको बढी आलोचना गरे । दाङ १ बाट निर्वाचित मेटमणि चौधरी र कैलाली २ बाट निर्वाचित झपट रावल अन्य सांसदभन्दा बढी आक्रोशित भए ।
सांसद चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपार्ने मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्ने बताए । मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याएर म्याच फिक्सिङ गरेको आरोप उनले लगाए । ‘म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडीको हातमा हतकडी लाग्छ । जेल जानुपर्छ । आज मन्त्रीहरूले बजेट र कार्यक्रम फिक्सिङ गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पारेका छन् । म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडीले जेल जानुपर्छ भने बजेट र कार्यक्रम फिक्सिङ गर्ने मन्त्री जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ? जेल जानैपर्छ,’ पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नाम लिँदै चौधरीले भने, ‘यस्ता मन्त्रीबाट देश न उँभो लाग्न सक्छ, न सम्पन्न हुन सक्छ न त जनता खुसी हुन सक्छन् । जसरी फिक्सिङ गर्ने खेलाडीलाई देशद्रोहको आरोपमा जेल पठाइन्छ, त्यस्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै कार्यक्रम पार्ने मन्त्रीलाई जेल पठाउनुको विकल्प छैन, जेल पठाउनैपर्छ ।’
सांसदद्वारा नियमावली उल्लंघन
छलफलमा भाग लिने सांसदले अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द बोलेमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली उल्लंघन भएको मानिने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २१ अन्तर्गत छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमको ‘ङ’ मा कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने किसिमले असर पर्ने गरी छलफलमा बोल्न नपाइने उल्लेख छ । तर, सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेको भन्दै मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्नेसम्मको गाली गरेका छन् । यसरी जानीजानी नियमावली उल्लंघन गर्ने सांसदलाई १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ३२ मा सदस्य निलम्बनको प्रावधान छ । नियम ३२ को उपनियम १ मा नियमावलीको जानीजानी उल्लंघन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछन् ।
नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेस भएमा सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिन्छ । निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको बढीमा पन्ध्र दिनसम्म सभा र समिति बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
शून्य समयमा महँगीको विरोध
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार शून्य समय सुरु भएको छ । शून्य समयमा बोल्ने सांसदले मूल्य वृद्धि अकासिएकाले नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसद अमनलाल मोदीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम मूल्य वृद्धि र हाहाकार भएको बताए । ‘चर्को मूल्य वृद्धिमा मौनता हैन, सशक्त अनुगमन होस्,’ उनले भने । अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार र व्यापारीको मिलिभगत भएकाले मूल्य बढेको आरोप लगाए । नेकपाका खगराज अधिकारीले बजारमा कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेट कायम रहेकाले सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिपक्षी सांसद प्रकाश रसाइलीले सरकारले कर बढाएकाले व्यापारीले कमाउन मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाए । अतहर कमाल मुसलमानले इदमा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरे । इन्द्रकुमारी शर्माले महोत्तरीमा भएको बलात्कार घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरिन् । उमा रेग्मीले सभामुख र उपसभामुख संविधानअनुसार फरक पार्टीको हुनुपर्ने बताइन् । संविधान पालना गर्न उनले आग्रह गरिन् । गणेश ठगुन्नाले दार्चुलाको जिल्ला अस्पताल छिटो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । शून्य समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ५ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था संसद् नियमावलीमा छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ २१:३५
ललितपुरले हटाएपछि अलराउन्डर महबुब आलमको खेल जीवन संकटमा !
पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन : नवीनसँग विकास स्तब्ध
ईपीएलः नयाँ सिजनलाई पोखरा आशावादी
ईपीएललाई आईसीसी मान्यता
सरस्वती र लिटिल बुद्ध विजयी
राइनो कपको उपाधि च्यासललाई